Foyii Loli Qeerroo! -
Tooftaa qabsoo bilisummaa keessatti walitt bu’iinsa diina wajjinii kan filatu nuyi warra humnaa fi meeshaa waraanaa guddaa hin qabne tahuu qaba. Diina keenya yaroo barbaadnu, bakka barrbaanutti bakka hubuu dandeenyutti itti buu qabna. Warri qabsoon bilisummaa malee akka tahe quba hin qaqbne meere waraanni keessan? keessattuu WBOn isaa jira jedhanii yaroo waakatan dhageenya. Akka yaada namoota akkasiif utuu tahe WBOn jiraachuu isaa mirkaneef waraana TPLF kana dura dhaabbatee yaroo gabaaba keessatti haxxaa’amuu danda’a.
Anaaf WBOn Qeerroo dha. Qeerroons WBO dha. Kan uummata Oromoo wajjin dhaabbatee dhiiga isaa dhangalaasu hunduu WBO dha. WBOn (waraanni bilisummaa Oromoo) xiqqaa fi guddaa, jaarsaa fi jaartii, diiraa fi dubartii, qeerroo fi qarree Oromoo warra walabummaa Oromiyyaa argamsiisuuf of kennee wareegama qaalii baasaa jiru dha. Humna Oromoo kanatu mootumaa faashitii TPLF dhiiga ilmaan Oromoo waggaa 26 olii dhugaa turte hundee ishee raasee kan buqqisaa jiru. Gaafa Oromiyaan bilisa baatu hoccuu raayaa ittisa biyyaa tokkicha ufatee as baha.
Yaroo TPLF torbaan dheeraaf of qaraan jira jettee mala qabsoo Uumata Oromoo ittiin dhaamsitu xaxaaa turte , warra” suutaa jedhaa dha”, warra “OPDO keessaa haaromsuuf deeman kanaaf ayyaana haa laannu” jedhee nu dogoorsuuf yaalaa turan daga’aa turre. Har’as kunoo “Obbo Lammmaan waan namichi TPLF jedhe irraa adda kan tahe haasaa waan jiruuf” gargaaruu qabna warri jedhan jiru. Namni tokko waan barbaade yaaduu, itti amanuufi yaada isaan buluuf mirga qaba. Warra qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo beekaa ykn utuu hin beekiin gara dabarsuu barbaadan jabeessinee dura dhaabbana.
OPDOn qaama Ihaadag (EPDRF) akka taate kan wal gaafannu hin qabnu. EPRDF kan ajajuu fi akka hoolaa fuyyoo mormatti hidhee harkisee deemuu TPLF akka tahes wal nama hin gaafachiisu. Utuu TPLF jirtu warri OPDO keessa jiru akkam godhanii qofaa isaaniin waan barbaadan uummata isaaniif murteessuu danda’u? Uummata isaaniif hojjechuuf ayyaana argachuuf yoo barbaadan qabsoo uummatni isaanii ofaa jirutti makamanii olaantummaa TPLF yoo cabsaan isaanuu bilisa bahu.
Wal gahii koree jidduu EPRDF booda akka walii galanitti yaadduma tokko bifa adda addaan ibsuu yaroo yaalan agarree jirra. Waan namootni tokko tokko sirbaan fudhatan keessa tokko mana hidhaa Ma’ikelaawii jedhamee beekamu kan qaroon ilmaan Oromoo hammeenyi himamee hin dhumne keessatti raawwatamuu cufna kan jedhuu fi hidhamtoota siyaasaa hiikuuf jenna kan jedhu ture. Waan akkasii TPLF irraa yaroo dhufu afaaniin dubbachuu malee hojiin mul’achuu agarree waan hin beekneef baayyeen keenya ammannee hin fudhanne.Warri soba kanaan gammaddee garuu gurra nu duuchuu barbaadanis hinuma jiru.
Amma har’aa nama hidhamu malee kan hiikamu argaa hin jirru. Mana hidhaa Ma’ikelaawii cufuun uummata Oromoo hiikaa tokkos hin fidu. Uummatni Oromoo miliyoona shanta tahuu mana hidhaa Impaayeraa Itopiyaa keessaa jaarraa tokko ol jiraachaa jira. Manni hidhaa Ma’ikelaawii, Qilntoo, Qaalitii fi Ziwaayi kan hafanis godoo Leenconni Oromoo keessatti korokodamnii jiranii dha. TPLF waan lubbuu isheef sodaatuuf warra kana fuunaantt godoo keessatti ukkaamsaa jirti malee nuyis akkuma isaanii hidhaa keessaa jira. Mirga hormaataa, mirga barachuu, mirga nagaan baanee fi nagaan galuu hin qabnu. Leencoota keenya godoo keessa jiran wajjin garaagarummaan qabnu xiqqoo dha.
Warra mootummaan TPLF kun yoo kufe nagaatu boora’a jedhee akka uummatni Oromoo Fincila Xumura Garbumaa laafisuu gochuu qabsawwan arguun baayyee nama gaddisiisaa. Nagaan yoo boora‘e Uummatni Oromoo itti maaalitu hirata? Qabeenya qabaatee ni saamama jennee hin yaadofnu. Foqii ijaaratee hin qabu irraa hin fudhatamu. Seeraa fi heeraan jiraachaatee jalaa bade jennee hin yaadanu. Aangoo siyaasaa qabaatee dhabuuf hin deemu. Kan Uummata Oromoo itti hafu hiyumaa fi cancala garbummaa cirree of irraa gatuu duwwaa dha. Uummatni Oromoo bilisummaa isaa guututti gonfachuuf Mootummaa TPLF barbadeessuu qaba. Amma Mootummaan TPLF jiraatetti Uummatni Oromoo tasa haqa isaa argachuu hin danda’u.
Wal gahiin Koree jidduu EPRDF namoota siyaasaaf hidhaman hiikuuf walii gallee jirra erga jedhanii labsanii as karaa warra nagaa eeganii isaanii “Qorrannoo Gadi-Fageenyaa, Qeerroo” irratti akka gochaa jiran ifatti ibsanii jiru. Utuu balleessaa goone hundaa ni fuddanna jedhanii, Oromoota nagaa kumaatamaan lakkawwaman ajjeessaa, qee’ee isaanii irraa buqqisaanii jiruu fi jireenya isaa diigaa itti hin gaafatamiin, qarroo ilmaan Oromoo fixxuuf akkeekachaa jiraachuu isaanii of saaxilu. Waan hundaa caalaa waanti nuuf ifa tahuu qabu jira. Akka oddessamutti TPLF imaamata Nazii Jarmanii keessa daa’iman amma kuutaa sadetti gahanitti qoratanii yoo qarroo tahan dukkaa bu’anii ajjeessuu ykn qorchaan hadoochuu qaban kan jedhu ilmaan Oromoo irratti geggeessa jiru jedhama. Kanaaf raga dhiyeessuuf fagoo deemuu nu hin barbaachisu.
Fakkeenyaaf, Injineer Tesfahuun Camadaa biyyaa isaaniif dhiisee baqatee biyyaa bahe. Biyya isaatti akka barbaadan buraaquu irraa adamsanii biyya ala irraa qabanii fidanii kan ajjeessaniif waan sammuu guddaa qabuuf malee namumaa isaaf miti. Diinni isaanii guddaan sammuun isaa baayyee qaroo tahuu dha. Leencota keenya godoo hidhaa isaanii keessa jiran mara ilaala, beektotaa, haayyowwan fi qaroota uummtni Oromoo qabu dha. Uummatni Oromoo doofaa tahee akka barba baraan ilmaan isaaniif darbee bitamuuf beekaa fi qaroo keenya ajjeessuu fi samuu isaanii jeequudhaan hir’ina guddaa nutti fidaa jiru.
Haa tahu malee Qabsoo Qeerron Bilisummaa Oromoo gochaa jiruu hunduma keenya iyyuu kan nu boonsaa fi nu onnoomsaa dha. Abdii bilisummaa uummata keenyaa akka tahe illee mamii qabu. Qeerron Bilisummaa Oromoo ijaarsa Uummta Oromoo maraan ammatamee jiru tahuu Oromoota duwwaa utuu hin taane diinni keenya iyyuu bareechee hubatee jira. Qabsoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo oofaa jiru diina keenya irratti dhiphuu guddaa fideera. Ammaa har’atti qeerroo fi qarree Oromoo kumaatama hedduun hidhuu fi hiraarsuun, waxaluu fi ajjeessun kan hin balleesine har’a yaroo Uummatni Oromoo Bahaa amma Dhihaa, Kaabaa amma Kibaa Oromiyaa guututti Qeerroo wajjin dhaabbatee jiru balleessuuf yaaluun abjuu dha.
Karaa biraa Qeerroo Bilisummaa Oromoo eenyu ijaare gaaffi i jedhu irratti deebii garaagraa dhagaa’aa jirra. Eenyu akka ijaareen maaliif akka rakkina tahu naaf galaa hin jiru. Waan barbaachisu Qeerroon Bilisummaa Oromoo Uummata Oromoo dammaqsee, ijaaree ,qabsoo bilisummaa irratti bobbaasee jiraachuu dha. Kanaafuu namni Oromoo tahee cinqni uummatni keenya keessa jiru isa mararu hunduu Qeerroo Bilisummaa Oromoo waajjin dhaabannee karaa dandeenyu maraa gummaachuuf qabna.
“Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo”, Amajjii 11,2018 qulbiin dubbiseera. Ogummaa, dandeetti fi beekumsaa guddaan qabsoo saba keenyaa fininsiisaa jirtu. Galatni keessaan bilisummaa saba keesaanii isiniif haa tahu. Uummatni Oromoos gaaffii tokko malee akka hoogana keessan kana hordofu mamii hin qabu. Diina ofii foo’anii loluun barbaachisaa dha. Yaroo tokko itti hunda loluun humna ofii hubuu taha. Inni dura warra nu keessa taa’ee diinaaf hojjetu of keessaa aramnee baasuu qabna.
TPLF qarroo qerroo fi qarree Oromoo adda baaftee hin beektu. Kan beeku isa nu wajjin nyaatuu, isaa nu bokkee jiraatu, isa nu wajjin baratuu fi isaa nu barssisu. Basaasotonni TPLF bakka hunda jiru. Tarkaanfii fudhannu duraa isaaniin adda baafnee beekuu qabna. Balaa guddaa kan nu irraa gahaa jiru warra kana. OPDO keessa namoota afaan Oromoo dubbatan garuu dhalootan Oromoo hin taane baayyeetu jira. Warri kun naasuu tokko illee uummata Oromoof qabaachuu hin danda’an. Enyummaan isaanii baramuu qaba. Namoonni afaan Oromoo dubbatanii nu wajjin jiraatan hunduu Oromoo miti. Enyuuf akka hojjetan, eenyu wajjin akka jiran adda baafnee beekuu qabna. Warra kana utuu dugdati marxifannee deemnuu goota meeqa nu irraa ficcisiisanii jiru. Aarsaa guddaa baafnee jirra. Lubbuu qarroo keenyaa qusachuuf basaastota kana irraa aanuu qabna. Ijoolleen keenya mana barumsaa keessaa ari’aman filatamanii warra qaroo akka tahe hin dagatiina.
Inni lamaffaa dinagdee fi siyaasaa TPLF duruu halayaa irraa geenyee jirra. Dinagdee Mootummaa TPLF barbadeessuuf tooftaan isiin ittiin deemaa jirtan filmaata hin qabu. Itti jabeessaa . Karaa siyaasaa uummataa Oromoo dammaqistanii , ijaartanii qabsoof qopheessuu irratti waan dansa hojjetaniitu. Hojjiin keessaan kun warra TPLFiif qawwee baatee deemu keessatis babal’achuun ni barbaachisa. Nama lamaa fi sadii general gochuun wal qixxummaa hin fidu. Har’a yaroo qabsoon Oromoo muddu nama gowwomsuuf warri generalummaa nama laatuu fi fudhatu lachuu itti qaana’uu qabu. Dandeetii fi beekuumsaan yoo argatan ni fakkaata. Garuu waan sobaan namatti kenanii dhaqii uummata kee fixxi jechuun haalan fokkisaa dha.
Sabaa fi sab-lammii Impaayeera Itopiyaa keessa jiran akkuma UummataOromoo akka ijaarsa Qeerroo mataa isaanii qabaatan gargaaraa. Mootummaa TPLF kana jalatti Saba fi Sabi-lammiin hin saamiin, hin hidhamiin fi hin ajjeessamiin jiru. Hunduu TPLF irratti aarii qaba, Uummata Somalee fi Tigrayi dabaletee. Bakka deemtee hundatti akka salphatuu fi fudhatamaa dhabdu gochuudhaan qofaa hambisuu ni barbaachisa. Biyya alaa keessatti qulaa dhaabbachaa jirti. Warri ala jiruus akkuma kana jabeessanii ishee saaxiluu dha.
Inni sadaffaan akka amma jiru kanatti Motummaa TPLF waraanan barbadeessuun ni jabaataa. Meeshaa guggudaa of harkaa qabdi. Humni keenyaa wal hin gitu. Foonne jalaa carabaa deemuu nu barbaachisa. Duraan dursinee basaastota ishee of keessaa yoo buqifnee ilmaan Oromoo qaroo tahanii nu keessaa funaanuu hin daneessu. Yoo waloon walitti qabdee nama baayyee nuu iraa ajjeeftes irraa hafna. Amma waraanni ishee laasha’uu fi qawwee darbee baqatutti humna keenya qusachaa hiraarsaa deemna. Yaroo isheen garatti baqatu dhabdu afuura ishee keessaa baasuun ni salphata. Yaroo humni ishee du’aa deemu humni ittiisaa keenya immoo guddachaa bula. Daandiin qabatanii kaatan Daandii Kallacha Bilisummaa waan tahee waan qabnu maraan Fincila Xummura Garbummaa Jabbeessuuf maqaa uummata keenyaan waadaa isiniif galla.
← Egypt Blocked Turkish Ship Carrying 410 Tons of Explosives to Ethiopia Oromiyaa: Moving Towards the Ultimate Victory →